Izindaba - Intambo eboshiwe
Imicu yephrinta ye-3D
Inqubomgomo Yangemva Kokuthengisa
Ukuqhafaza kungenzeka ekuqaleni kokuphrinta noma phakathi. Kuzodala ukuthi izitobhi zokuphrinta, zingaphrinti lutho maphakathi nokuphrinta noma ezinye izingqinamba.
Intambo endala noma eshibhile
Ension Extruder ukungezwani
∙ Nozzle bagxunyekwe
Amathiphu wokuxazulula inkinga
Ngokuvamile, imicu ihlala isikhathi eside. Kodwa-ke, uma zigcinwa zisesimweni esingalungile njengokukhanya kwelanga ngqo, lapho-ke zingaba brittle. Imicu eshibhile inebumsulwa obuncane noma yenziwe ngezinto zokuphinda zisetshenziswe, ukuze kube lula ukuzinqamula. Olunye udaba ukungahambelani kobubanzi be-filament.
Lapho usuthole ukuthi intambo icishiwe, udinga ukufudumeza umbhobho bese ususa intambo, ukuze ukwazi ukuphinda unikeze kabusha. Uzodinga ukususa ithubhu yokudla uma intambo ingena ngaphakathi kwephubhu.
ZAMA OMUNYE UMDLALO
Uma ukuqhuma kwenzeka futhi, sebenzisa enye intambo ukubheka ukuthi intambo eqhekekile indala kakhulu noma ishibhile okufanele ilahlwe.
Ngokuvamile, kunomuntu ophikisayo ku-extruder okunikeza ingcindezi yokondla intambo. Uma i-tensioner icinene kakhulu, khona-ke intambo ethile inganqamuka ngaphansi kwengcindezi. Uma intambo entsha iqhuma, kubalulekile ukuhlola ingcindezi yomshushisi.
LUNGISA UKUQINISEKA KWE-EXTRUDER
Mxegise umncishi kancane bese uqinisekisa ukuthi akukho ukugeleza kwentambo ngenkathi udla.
I-nozzle eminyene ingaholela entanjeni eqhekekile, ikakhulukazi intambo endala noma eshibhile enamahloni. Bheka ukuthi umbhobho ugaxekile yini bese uhlanza kahle.
Iya ku Nozzle Jammed isigaba semininingwane eminingi yokuxazulula le nkinga.
HLOLA UKUSHESHA KOKUSHESHA NOKUHAMBA KWESilinganiso
Bheka ukuthi umbhobho uyaqala ukushisa yini kanye nezinga lokushisa elifanele. Futhi hlola ukuthi izinga lokugeleza kwentambo liku-100% hhayi ngaphezulu.